नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमित कम देखिनुका पाँच सम्भावित कारण « Mechipost.com
नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमित कम देखिनुका पाँच सम्भावित कारण
प्रकाशित मिति: २८ चैत्र २०७६, शुक्रबार ०९:५०
विभिन्न विकसित राष्ट्रहरू पनि कोभिड–१९ महामारीबाट धेरै प्रभावित भएको बेला नेपालमा सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएका व्यक्तिको संख्या निकै न्यून छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म नेपालमा नौ जना व्यक्तिमा मात्र कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखिएको आधिकारिक तथ्याङ्क छ ।
त्यसमध्ये एक जना निको भइसकेका छन् भने आठ जनालाई विभिन्न स्थानमा आइसोलेशनमा अर्थात् अलग्गै राखेर उपचार गरिँदैछ । बुधवार साँझसम्मको विवरणअनुसार सङ्क्रमणको आशङ्कामा थप १३४ जनालाई आइसोलेशनमा राखिएको छ । उनीहरूको परीक्षण प्रतिवेदन आउन बाँकी छ ।
नेपालमा भेटिएका सङ्क्रमितमध्ये आठ जना विदेशबाट आएका छन् भने एक जना सङ्क्रमित व्यक्तिकी परिवारकी सदस्य हुन् । नेपालको स्वास्थ्य सेवाको अवस्था र सुरुमै नेपालले विदेशबाट आउने नागरिक तथा विदेशीहरूलाई क्वारन्टाइनमा नराखेका नेपालमा अरू व्यक्ति पनि सङ्क्रमित भएको हुन सक्ने केही जनस्वास्थ्यविज्ञ र टिप्पणीकारको आशङ्का छ ।
तर केही विज्ञहरू नेपालमा अहिलेसम्म कुनै पनि एउटा स्थानमा एकै खाले लक्षण देखिएर धेरै मानिस बिरामी भएको वा तिनको मृत्यु भएको नदेखिएकाले त्यस्तो आशङ्का पुष्टि गर्न नसकिने तर्क गर्छन् । नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण धेरै नदेखिनुमा विभिन्न कारण हुन सक्ने चिकित्सक तथा जनस्वास्थ्यविज्ञहरू बताउँछन् ।
विज्ञहरूले देखेका पाँच सम्भावित कारणहरू यस्ता छन्ः
कतिपय चिकित्सकहरूले नेपालमा परीक्षण नै कम भएका कारण सङ्क्रमितको संख्या कम देखिएको बताएका छन् । उनीहरूका भनाइमा जति परीक्षण भएको छ त्यसको आधारमा नेपालमा कोरोनाभाइरस धेरै फैलिएको छैन भन्न सकिँदैन ।
स्वास्थ मन्त्रालयका अनुसार बुधवारसम्म कुल २,३६६ वटा नमुनाको परीक्षण गरिएको छ । त्यसमध्ये नौवटा मात्र सङ्क्रमण देखियो । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका पूर्वप्रमुख डा. बाबुराम मरासिनी नेपालमा परीक्षणको गति र संख्या बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।
उनी भन्छन् “यो कुरा त हामीले सुरुदेखि नै भनिरहेका छौँ । विशेषगरी ज्यानुअरीदेखि नेपालमा धेरै पर्यटकहरू आए त्यसबेला नै नेपालमा धेरैमा सङ्क्रमण भएको पनि हुन सक्छ ।” त्यस्तो सङ्क्रमण समयक्रममा आफैँ निको भएर गएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘नेपाल जर्नल अफ एपिडिमियोलोजी’मा हालै प्रकाशित एउटा लेखमा पनि नेपालमा परीक्षण नै कम भएको उल्लेख गरिएको छ । नेपाली र विदेशी गरी छ चिकित्सकले लेखेको उक्त लेखमा “परीक्षणको अभावमा थोरै मानिसहरूको मात्र सङ्क्रमण पत्ता लागेको हुन सक्ने” उल्लेख छ ।
यसरी कम परीक्षण हुनुमा परीक्षण काठमाण्डौँ केन्द्रित हुनु, परीक्षण गर्ने सामग्री, किट र उपकरणको अभाव र चिकित्सकहरूले नमुना लिन नमान्नु आदि कारण भएको केही सरकारी चिकित्सकहरूले बताएका छन् । तर सरकारले केही दिनअघिदेखि काठमाण्डौँबाहिर पनि परीक्षण सेवा विस्तार गरेको छ भने तीव्र रूपमा परीक्षण गर्ने जनाएको छ ।
कतिपय चिकित्सकले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै उपत्यकाबाहिर सेवा विस्तार गरिए पनि लक्षण देखिएका व्यक्तिबाट नमुना सङ्कलन गर्न धेरै स्वास्थ्यकर्मी तत्पर देखिएका छैनन् ।
त्यसको उदाहरण दिँदै आफ्नो नाम सार्वजनिक गर्न नचाहने एक चिकित्सकले भने, “सुदूरपश्चिममा भेटिएका सङ्क्रमितहरूको ‘स्वाब’ लिनका लागि त्यहाँका चिकित्सकले नमानेपछि नेपाली सेनाका चिकित्सक पठाएर लिइएको थियो । अझै पनि चिकित्सकहरू नमुना लिन तत्पर छैनन् । त्यसैले नमुना सङ्कलन र परीक्षण बढाउने भनेर मात्र हुँदैन ।”
कतिपय चिकित्सकहरूले नेपालीहरूको जीवनशैलीका कारण पनि कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण धेरै नफैलिएको हुन सक्ने तर्क गरेका छन् । तर उनीहरूकै भनाइमा यसबारे विस्तृत अध्ययन नभई ठोकुवा गर्न भने सकिँदैन ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल क्लिनिकल अनुसन्धान एकाइका प्रमुख डा. शेरबहादुर पुन पनि नेपाली जीवनशैलीका कारण कम सङ्क्रमण भएको हुन सक्ने ठान्छन् । उनले विभिन्न पत्रपत्रिकामा आलेख नै प्रकाशित गरेर नेपाली जीवनशैलीको प्रभावले कोरोनाभाइरस फैलिने सञ्जाल भत्किएको टिप्पणी गरेका छन् ।
बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, “हामी धेरै पानी खेलाउने रहेछौँ अनि खानेकुराहरू पनि धेरै पकाएर खान्छौँ । त्यस्तै हात मिलाउने, अङ्कमाल गर्ने वा म्वाइँ खाने चलन पनि हाम्रोमा कमै छ । यस्ता क्रियाकलापले कोरोनाभाइरस फैलिनबाट रोकेको हुन सक्छ ।”
उनले नेपालमा विगतमा सार्स र स्वाइन फ्लूको सङ्क्रमण पनि अन्यत्रजस्तो नदेखिएको स्मरण गर्दै अन्यत्रको तुलनामा भारतमा पनि सङ्क्रमण फैलिने दर कम भएको बताए । पुनले भने, “हाम्रो खानपान र जीवनशैलीले कोरोनाभाइरस फैलिने साङ्लोलाई कतै न कतै चुँडाइरहेको छ भन्ने एउटा दरिलो तर्क हो । अब यसमा विस्तृत अध्ययन हुन जरुरी छ ।”
३. नेपालीको प्रतिरक्षा प्रणाली ‘बलियो’ हुन
विज्ञहरू नेपालीहरूमा रहेको औसत प्रतिरक्षा प्रणाली अन्यको तुलनामा फरक भएकाले पनि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण कम भएको हुन सक्ने बताउँछन् । परीक्षण कम भएको अवस्थामा पनि नेपालमा कोरोनाभाइरससँग मिल्दोजुल्दो सङ्क्रमण एउटै टोल वा गाउँमा फैलिएको खबर अहिलेसम्म नआएको कुराले त्यसलाई पुष्टि गर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
उनीहरूका बुझाइमा कोरोनाभाइरस फैलिएकै भए पनि नेपालीहरूको प्रतिरक्षा प्रणालीका कारण सामान्य लक्षणहरू मात्र देखिँदा धेरै अस्पतालसम्म नपुगेका हुन सक्छन् । डा. मरासिनी भन्छन् “कतिपय रोगसँग लड्ने क्षमता जातिअनुसार फरक हुने गर्छ। त्यसबारे धेरै अध्ययन अनुसन्धान पनि भएका छन् । अमेरिकामा पनि गोरा र काला जातिबीच कुनै एउटा रोगसँग लड्ने क्षमता कम र बढी पाइएको छ ।”
“अर्को उदाहरण हेर्ने हो भने थाईल्यान्डमा दादुरालाई खासै ठूलो रोगै मानिँदैन । त्यहाँका मानिसहरूले त्यसलाई पचाएको जस्तो देखिन्छ । तर हाम्रोमै दादुरा निकै घातक पनि भएको छ ।” डा. पुन चाहिँ हाल नेपालमा भेटिएका नौ जना सङ्क्रमितमा एकदमै सामान्य खालका लक्षणहरू मात्र देखिनुलाई त्यसको गतिलो प्रमाण मान्छन् ।
उनी भन्छन्, “नेपालमा देखिएका नौ जनामै किन माइल्ड (मध्यम) लक्षणहरू मात्र देखियो त ? अहिले टेकुमै हामीले उपचार गरिरहेका बिरामीहरूलाई पनि हामीले राख्नैपर्ने भएकाले मात्र राखेका हौँ । अन्य रोग लागेको थियो भने उहाँहरूलाई घरै पठाइसक्थ्यौँ । कसैमा पनि कुनै गम्भीर लक्षण नै देखिएको छैन ।”
तर यसमा नेपालीहरूको प्रतिरक्षा प्रणालीले कति भूमिका खेलेको छ भन्ने चाहिँ अनुसन्धानकै विषय भएको उनले बताए । पुनका अनुसार नेपालीका लागि कोरोनाभाइरस नौलो पनि होइन । किनकि कोरोनाभाइरस भाइरसको एउटा प्रजाति हो र अहिलेको भाइरस सातौँ नम्बरको हो ।
सातमध्ये मिडल इस्ट रेस्पिरटरी सिन्ड्रोम (मेर्स) पनि ःभ्च्क्(ऋयख् नामक कोरोनाभाइरसकै कारण लाग्ने गर्छ । उक्त भाइरस मध्यपूर्वमा मात्र धेरै फैलिएकाले त्यहाँ काम गर्ने धेरै नेपालीमार्फत् नेपाल आएको हुन सक्ने डा. पुनको अनुमान छ ।
तर त्यसको परीक्षण नगरिँदा नेपालमा नभेटिएको र नेपालीले उक्त भाइरसलाई परास्त गरेको हुन सक्ने उनको धारणा छ । त्यस्तै सार्स महामारीबाट नेपाल प्रभावित भएको थिएन। त्यस बेला पनि परीक्षण कम हुँदा नदेखिएको हुन सक्ने उनी बताउँछन् । त्यसबाहेक ह्यूमन कोरोनाभाइरस भनिने चारवटा कोरोनाभाइरस रहेका छन् ।
पुनले भने “नेपालमा ह्यूमन कोरोनाभाइरसहरू जन्मदेखि छ महिनासम्मका शिशुमध्ये आठ प्रतिशतमा देखिको एउटा अनुसन्धानले देखाएको थियो । त्यसले मलाई कतै हाम्रोमा एन्टीबडीको काम र्गयो कि जस्तो लाग्छ ।”
क्षयरोगबाट बच्नका लागि बीसीजी खोप दिने गरिन्छ । कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिएपछि अहिले उक्त खोपलाई लिएर विश्वभरि नै बहस चलिरहेको छ ।
बीबीसी विश्व सेवाका अनुसार हालैको एउटा समीक्षा हुन बाँकी अध्ययनले जुन देशहरूमा बीसीजी खोप दिइएको थियो ती देशहरूमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण कम देखिएको जनाएको छ । नेपालमा पनि बालबालिकाहरूलाई यो खोप अनिवार्य रूपमा लगाइदिने गरिन्छ।
त्यसले गर्दा पनि नेपालमा सङ्क्रमण कम फैलिएको र सङ्क्रमितहरूलाई पनि उक्त खोपको प्रभावका कारण सामान्य लक्षणहरू मात्र देखिएको हुनसक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । मरासिनी भन्छन् “यो विषय त अहिले सबैतिर चर्चामा आयो । खासगरी युरोप र अमेरिकामा यो मात्र नभई अन्य खोपहरू पनि लगाउने चलन कम छ । नेपालमा भने हामीले अनिवार्य नै खोप लगाउँछौँ । त्यसको प्रभाव पनि हुनसक्छ ।”
विशेषगरी कम विकसित देशमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण निकै कम देखिनुको अर्को कारण भनेको भाइरस फैलाउन सहयोग गर्ने खालका सहरी पूर्वाधारकै कमी हुन सक्ने पनि चिकित्सकहरूको तर्क छ । विकसित देशमा जमिनमुनि सब–वे र मेट्रो रेलजस्ता यातायातका संरचनाहरू रहेका छन् । त्यस्ता पूर्वाधार भारतका महानगरहरूमा पनि छन् ।
“नियमित सफा राखिए पनि त्यस्ता संरचनामा मानिसहरूको भिडभाड भइरहने गर्छ । त्यहाँ कृत्रिम रूपमा तापक्रम त मिलाइएको हुन्छ तर घामको प्रकाश कहिल्यै पर्दैन । भाइरस त्यस्ता स्थानमा लामो समय टिक्छ भन्ने त प्रमाणित भइसकेकै कुरा हो । नेपालमा भने त्यस्ता संरचना नै छैनन्” मरासिनी भन्छन् ।
नेपालमा प्रायः यातायातका साधनहरूमा भिडभाड भए पनि घामको प्रकाशमै हिँड्ने खालका रहेको र सार्वजनिक यातायातमा विदेशीहरू चढ्दै नचढ्ने गरेकाले सङ्क्रमण कम भएको हुन सक्ने उनको तर्क छ । त्यस्तै ठूलाठूला लिफ्टजस्ता पूर्वाधारमा कोचिएर मानिसहरू बस्ने तथा एक जनाले छोएको स्थानमा अर्कोले छुने क्रियाकलाप हुने गर्छन् ।
तर नेपालमा काठमाण्डूभित्र केही स्थानमा बाहेक अन्यत्र यस्ता पूर्वाधार नै नभएकाले पनि सङ्क्रमण फैलावटको साङ्लो चुँडिएको हुन सक्ने उनले बताए । उनले भने, “त्यति मात्र होइन युरोप–अमेरिकातिर हेर्दा चिटिक्क तर पानीको खासै प्रयोग नहुने खालका शौचालयहरू पनि प्रयोगमा हुने गर्छन् ।
त्यसले पनि सङ्क्रमण फैलाउन भूमिका खेलेको हुन सक्छ । हाम्रोमा त चिटिक्क नभए पनि शौचालयमा पानी अनिवार्य चाहिन्छ ।” सङ्क्रमण फैलाउन भाइरसलाई कति बेरसम्म बचाएर राख्न सक्ने खालका पूर्वाधार छन् भन्नेले पनि भूमिका खेल्ने उनको दाबी छ । (बीबीसी नेपालीबाट साभार)